फेवा फाइनान्स कम्पनी लि . | गृहपृष्ठ
Home लगानी फेवा फाइनान्स कम्पनी लि .
on: १७ पुष २०६६, शुक्रबार ००:०० लगानी 14 views
फेवा फाइनान्स कम्पनी लि .
वर्गीकरण : ग वर्गको वित्तीय संस्था
मुख्य कार्यालय : बीपी चोक, चिप्लेढुङ्गा पोखरा
स्थापना : २०६० वैशाख १७
अध्यक्ष : सुशील गौचन
सीईओ : रेशम बहादुर थापा
शाखा कर्यालय : ८
देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको पूँजीलाई सङ्कलन गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यले पोखराका स्थानीय लगानीकर्ताहरूको पहलमा यो कम्पनीको स्थापना भएको हो । यो वित्त कम्पनीले देशमा विभिन्न किसिमका शीपमूलक व्यवसाय, कृषि उद्योग तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग गरिरहको छ । साथै, साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्नेखालका कार्यक्रममा जोड दिने उद्देश्य कम्पनीले लिएको छ । स्थापनाको आठौं वर्षपूरा गरेको यो कम्पनीको चुक्ता पूँजी अहिले रू.२७ करोड ३० लाख रहेको छ । अघिल्लो आवमा यो कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई १५ दशमलव ७९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसैगरी, यसै साता बसेको कम्पनीको १ सय ७२ औं सञ्चालक समितिको बैठकले आव ०६७/६८ का लागि लगानीकर्ताहरूलाई १६ दशमलव ३१५ प्रतिशत नगद लाभांश र १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव आगामी वार्षिक साधारणसभामा लैजाने निर्णयगरेको छ ।
यस कम्पनीको शेयरमूल्यको १ सय ८० दिने ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा यो अहिले न्यूट्रल जोनमा देखिएको छ । हाल स्केल ४१ मा रहेको यस कम्पनीको शेयरमूल्यका आधारमा बनेको आरएसआई रेखाले सो अवस्था देखाएको हो । विगत केही समयदेखिको आरएसआई रेखाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो कम्पनीको शेयर कारोबार केही कम भए पनि मूल्यमा भने उतारचढाव देखिएको छ । साथै दास्रो बजारमा निकै कम कारोबार हुने गरेको यो कम्पनीको शेयर सन् २००५ को अगष्टदेखि हालसम्म तीनपटक ओभरसोल्ड जोनमा देखिएको छ । अहिले ओभरसोल्ड जोनबाट उकालो लाग्नुका साथै कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने प्रतिफलदर पनि सार्वजानिक गरेकाले यसको शेयरमूल्य विस्तारै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । फलस्वरूप, यो कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूका लागि अहिले उपयुक्त समय छ भने विक्रीकर्ताहरूले केही समय प्रतीक्षा गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।
आर्थिक वर्ष०६७/६८ अन्त्यसम्म यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. २७ करोड ३० लाख रहेको छ । साथै गत आवको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सो आवमा यस कम्पनीले रू. ६ करोड ५७ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । उक्त नाफा अघिल्लो आव ०६६/६७ को भन्दा १५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले बढी हो ।
त्यसैगरी अघिल्लो आवको तुलनामा यस कम्पनीको जगेडा कोष २२ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. १२ करोड ५४ लाख पुगेको छ । साथै सो अवधिमा यो कम्पनीको निक्षेप सङ्कलन पनि १८ दशमलव ९७ प्रतिशतको वृद्धिसंगै हाल रू. २ अर्ब नाघेको यसले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, लगानीतर्फ पनि ७१ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि भई हाल रू. ३ करोड ९७ लाख विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यसरी कम्पनीले लगानी विविधीकरण गरी लगानीको क्षेत्रमा गरेको उल्लेख्य वृद्धि गरेकाले आगामी दिनहरूमा यसको मुनाफा दर पनि वृद्धि हुने सम्भावना बढेको छ । साथै ऋण प्रवाहतर्फपनि गत आवमा ११ दशमलव ४० प्रतिशतले वृद्धि भई हाल रू. १ अर्व ८५ करोड पुगेको छ ।
• यस कम्पनीको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कम मात्रै कारोबार हुने गरेकाले लगानीकर्ताहरूले चाहेको समयमा किन्न र बेच्नका लागि समस्या पर्ने देखिन्छ । फलस्वरूप, आफूलाई उपयुक्त लागेको समयमा उक्त कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न र आवश्यक परेको समयमा विक्री गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैले, शेयरमूल्यमा आउने उतारचढावको अवस्थाले गर्दा सट्टेवाजहरूले यस कम्पनीको शेयरमा लगानी गरी मुनाफा कमाउन सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
• यो कम्पनीका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू सुधारोन्मुख देखिएका छन् । कम्पनीको प्रतिशेयर आय तथा मूल्य-आम्दानी अनुपातमा सुधार हुँदै गएको छ । साथै अन्य प्रतिस्पर्धी वित्त कम्पनीहरूको तुलनामा यो कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्था सबल
नै देखिन्छ ।
• हाल यो कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश दर अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा उच्च देखिएको छ । साथै यो लाभांशदर वाणिज्य बैङ्कहरूले वितरण गर्ने लाभांश दरभन्दा कम नभएको देखिन्छ ।
• हालको बजार मूल्यको तुलनामा वितरण गर्न लागेको लाभांशदर उच्च देखिएकाले छोटो समयमा नै राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूका लागि यो कम्पनीको शेयर उपयुक्त हुने देखिन्छ । कम लगानी र छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल पाउने सम्भावना अझ बढी देखिन्छ ।
विराटनगर भन्सारमा कम राजस्व सङ्कलन
व्यङ्ग्यार्थ : मङ्गलवार, २७ कात्तिक २०७५